Visa ka Etiopia
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, njem ndị njem na mba Africa a na-emewanyewanye ihe, ọtụtụ ndị ọzọ ga-ahụkwa mma nke Etiopia dị omimi ahụ. Otu n'ime isi okwu ndị na-ebili mgbe ị na-eme atụmatụ njem bụ ma ndị Russia chọrọ visa na Ethiopia. Ka anyị chọpụta!
Achọrọ m visa?
Azịza nke Ụlọ ọrụ Embassy nke Etiopia na Moscow bụ ihe doro anya: maka nleta na mba a, ndị Belarus, ndị Russia, ụmụ amaala nke Kazakhstan na ndị ọzọ CIS mba chọrọ visa. Ị nwere ike ịnye ya na ndị agbata obi anyị ụzọ abụọ:
tupu oge eruo na ụlọ ọrụ nnọchiteanya;
ụbọchị ịbata na mba ahụ na ọdụ ụgbọ elu Addis Ababa nke Bol .
Dika nkwekorita nke ndi ozo n'etiti Etiopia na Russia si kwuo, ndi mmadu ndi na-ejide akwukwo ndi ozo ma obu diplomasi nke mba ndi a enweghi ihe ndi ozo.
Kedu ihe ị chọrọ iji nweta visa na Consulate Consia?
Ndepụta nke akwụkwọ ndị e debere na ngalaba consular, meghere na Embassy iji nye akwụkwọ visa, gụnyere:
paspọtụ mba ọzọ - ọ ghaghị ịdị irè maka ọbụlagodi ọnwa 3-4 mgbe ụbọchị nlọghachi;
otu foto nke ruru 3x4 cm (agba ma ọ bụ oji na ọcha);
ajụjụ - ọ ga - ejupụta n'asụsụ Bekee ma ọ bụ Russian ma onye ọ bụla chọrọ ịbanye n'aka ya;
A akwụkwọ site na ọrụ nke nzube bụ iji gosi na ego;
ozi gbasara ịdenye ụlọ nkwari akụ (ị nwere ike inye mbụ ma ọ bụ faksị) ma ọ bụ òkù pụrụ iche (site na nzukọ ma ọ bụ onye), ebe a ghaghị igosi oge na nzube nke njem ahụ n'egbughị oge.
Kedu mgbe m ga-edozi akwụkwọ?
Na Consulate enweghị ọkwa mbụ. Ihe edemede ị nwere ike ịnye onwe gị maọbụ enyemaka nke onye a tụkwasịrị obi (ha nwekwara ike ịnọchite anya ya). Nabata ngwa nke ndị na-enyocha ma nyefee visas dị njikere oge: Mon na Wed - site na 9:00 ruo 13:00, na Friday site na 9:00 ruo 13:00 wee malite site na 15:00 ruo 17:00.
Na Consulate ị nwere ike itinye maka visa na-abanye naanị maka ọnwa 1 ma ọ bụ 3, ụgwọ nke bụ $ 40 na $ 60, ma ọ bụ ọtụtụ maka ọnwa 3/6 - ụgwọ ha bụ $ 70 na $ 80.
Nhazi nke visa
Ichere visa gị maka ogologo oge agaghị adị mkpa. A na-emekarị usoro a na-ewe ụbọchị 2 site na mgbe e debere akwụkwọ ahụ. Site na ikike nke onye nyocha ahụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye njem nleta nwere ike ịnweta visa ọbụna n'ụbọchị ọ rịọrọ maka ya.
Ebee ka Ụlọ ọrụ Embassy nke Etiopia dị na Russia?
Maka akwụkwọ a ga-ezigara adreesị: Moscow, Orlovo-Davydovsky lane, 6. Iji dokwuo anya ajụjụ ndị ị nwere mmasị, ị nwere ike ịkpọ: (495) 680-16-76, 680-16-16. E-mail nke Embassy: eth-emb@col.ru.
Kedu ka esi etinye maka visa mgbe ị bịarutere?
Ịga na Etiopia nwekwara ike inye akwụkwọ visa. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịnye paspọọdụ gị ugbu a na ajụjụ ajụjụ mbata a na-aga na ọdụ ụgbọ elu nke Bole (jupụta ya tupu ị gaa n'asụsụ Bekee). Ọzọkwa, enwere ike ịjụ gị ka ị gosi akara ma ọ bụ gosi na ị nwere ego zuru ezu maka oge niile ị na-eme atụmatụ ezumike na mba Africa a. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eburu gị nnukwu ego na kaadị ahụ, jidere nkwupụta ahụ site na akaụntụ akụ gị. Enweghị ọgwụ mkpuchi ịbanye na Ethiopia, ma iji zere ọnọdụ ndị na-adịghị mma, ọ ka mma ịhazi ma were ya na njem.
Usoro dum maka ịpụta ma na-akwụ ụgwọ visa mgbe ị bịarutere na-etinyere na ụlọ ọrụ ahụ na ihe ịrịba ama "Visa na nbịaru". Ị ga-achọta ya tupu njikwa paspọtụ. Mgbe etinyela akwụkwọ nkwado visa ahụ na paspọtụ, ọ ga-adị mkpa ịgafe njikwa njem paspọtụ ma nweta akara akara.
Biko rịba ama na ọ dịghị aro na ọ ga-ekwe omume ịnye akwụkwọ visa na Etiopia maka ịgafe ókè ala.
Ịdị mma na ụgwọ nke visa mgbe ị bịarutere
Na ọdụ ụgbọ elu, ịnwere ike itinye maka visa na-abanye naanị (maka ọnwa 1 ma ọ bụ 3), na otutu (maka ọnwa 3 ma ọ bụ 6). Dabere na nhọrọ ahọrọ, ị ga-akwụ ụgwọ site na $ 50 na $ 100. A na-akwụ ụgwọ n'ime ego na dollar. Cheta na ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla n'oge njem ahụ, ị ​​nwere ike ịkpọtụrụ Embassy nke Russia na Etiopia ozugbo.
Mauritius - ebe nkiri
Ebe nkiri Tanzania
Kenya - ezumike osimiri
Ihe ngosi na Day Day
Nkwughari - gini bu usoro a na otu esi eji ya?
Yist mgwakota agwa "dị ka fluff" on kefir
"Egwuregwu nke n'ocheeze" gbanwere mmekọahụ ndụ ... ma ọ bụghị mgbe niile ka mma!
Ngwurugwu ndị na-eri mushrooms
Gini mere nkita ji aru mgbe gi na agba ya?
Kedu ihe bụ adenomyosis na ụmụ nwanyị?
Kedu esi kpoo igbe na akwa?
Mmiri mmiri Thompson
Shakira gosipụtara nnukwu mgbanwe
Greenhouse maka seedlings
Ụlọ nke kachasị
Onye na-egwu vidio Andy Murray katọrọ onye nta akụkọ maka akụkọ nwoke na nwanyị
Vitamin maka obi na arịa ọbara
Gini mere obi m ji merie?
Ụbọchị Ọgụgụ Ụbọchị
Emily Ratjakovski lụrụ
Egwu nke ezé - akpata na ịgwọ ọrịa niile
Ntị na-adaba Anauran